भगवान शिवका पिता को हुन ? निकै कौतुहलता जगाउने यो प्रश्न जस्तै उत्तर पनि छ त्यतिनै रोचक – " कञ्चनजंगा News "
भगवान शिवका पिता को हुन ? निकै कौतुहलता जगाउने यो प्रश्न जस्तै उत्तर पनि छ त्यतिनै रोचक
No Comments on भगवान शिवका पिता को हुन ? निकै कौतुहलता जगाउने यो प्रश्न जस्तै उत्तर पनि छ त्यतिनै रोचक
भगवान शिवका पिता को हुन?
भगवान शिवका पिता को हुन ? निकै कौतुहलता जगाउने यो प्रश्न जस्तै उत्तर पनि त्यतिनै रोचक छ। मानिनै आएको छ कि शिवको मातापिता छैनन। शिव अनादी अनि अनन्त छन्। शिवको कुनै जन्म छैन अनि अन्त्य पनि।एक पटक एक सन्तले शिवलाई सोधे, ‘हे प्रभु! तपाइको पिता को हुनुहुन्छ?’ भगवान शिवले भने, ‘ब्रह्मा जी मेरो पिता हुनुहुन्छ।’
सन्तले फेरी सोधे, ‘तपाइको हजुरबुबा को हुनुहुन्छ?’ शिवले जवाफ दिए, ‘भगवान विष्णु मेरो हजुरबुबा हुनुहुन्छ।’ सन्तले जिज्ञासु हुदै शिवलाइ हजुरबुबाको बुवाको बारेमा सोधे , ‘तपाइको जिजुबुवा को हुनुहुन्छ?’ शिवले स्तब्ध पार्दै भने, म स्वय हुँ। यति पढेपछि तपाइको दिमाग चक्कराउन सक्छ तर शिवको कहानी एक वृत हो। वृतको कुनै सुरुवात हुँदैन, अन्त्य पनि हुँदैन।
शिवको जन्म बारे अर्को कथा
एक दिन ब्रह्मा र विष्णु को शक्तिशाली भन्दै वादविवाद गर्दै थिए। अकस्मात प्रकासको एक खम्बा प्रकट भयो। सो प्रकास को खम्बा यति ठुलो थियो कि पृ्थ्वी, आकास र क्षितिजसम्म फैलिएको थियो। ब्रह्मा र विष्णुले सो खम्बाको सुरु र अन्त्य भेट्न सकेनन। द्धविधामा परे।
केही समय पश्चात सो खम्बाबाट भगवान शिव प्रकट भए। यो पुरै कहानीले पनि शिवको सुरु र अन्त्य नभएको बताउँछ।
शिवलाई प्रायजसो शिव लिङ्गको रूपमा पनि पुज्ने गरिन्छ । तर, भगवान् शिव जन्मिएका होइनन् प्रकट भएका हुन् भन्ने मान्यता रहिआएको छ, जुन सायदैलाई मात्र थाहा हुन् सक्दछ । पुराणहरूमा भगवान् शिवको उत्पत्ति बारेको केही प्रसंगहरु पाइन्छ । जसलाई आज हामी चर्चा गर्नेछौँ।
← एसियाकै धनी मुकेश अम्बानीले यस वर्ष सम्पत्तिमा १८ खर्ब रुपैयाँ थपे → मुस्लिमहरू येशूमा विश्वास गर्छन् तर किन क्रिसमस मनाउँदैनन्?